TELEports, Ubuntu Kubata inotova neyemuno Telegraph mutengi | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe usingazive, kana ini ndisiri muridzi anofara wePineTab imhaka yekuti haisati yasvika kwandiri. Chimwe chezvikonzero chandakasarudza kuitenga kwaive kuyedza Ubuntu Kubata pasina kugadzira kuburitsa kukuru, uye iyo PINE64 piritsi yakatengwa pa isingasviki € 90 kana tikasaverenga mari yekutumira, saka muna Chikumi ndakasvetukira mukati ndokuhodha imwe. Kubva pane zvandakaferefeta, Ubuntu Kubata isisitimu inezvirambidzo zvakawanda, asi zvinowanda uye zviripo zviripo, senge TELEports , que inowanikwa muOpenStore muchikamu che beta.
Ndisati ndaenderera mberi nekutaura nezve TELEports, ndinoda kupindura mubvunzo (s) uyo ungangodaro uchibvunzwa nevamwe: ndeapi marambidzo? Ubuntu Bata uye nei ndatenga iyo PineTab kana zvirizvo? UBports iri kuvandudza mashandiro nekungwarira, uye izvi zvinoreva kuti haidi kuti zvishandiso zvinoishandisa zvimire kushanda nekuda kwekusaita hanya nemushandisi, pakati pezvimwe zvinhu, senge nzira mbiri dzekuchengetedza dzinotsanangurwa naMiguel Menéndez zvakataurwa muchinyorwa chino. Neichi chikonzero, chitoro chaunoshandisa kuisa maapplication iOverStore, uko kwakawanda kunyorera kuri webapps. Kune rimwe divi, tinogona kuisa mapakeji kubva kumahofisi epamutemo kuburikidza neLibertine nemamwe masisitimu anoshanda, akadai sePostmarketOS kana Neon Mobile.
1 TELEports, unofficial Teregiramu mutengi weUbuntu Kubata iyo inosvika mubeta uye seyakajairwa app
2 Yakagadzirwa neUBports nezano uye nerubatsiro kubva kuTeregiramu
TELEports, unofficial Teregiramu mutengi weUbuntu Kubata iyo inosvika mubeta uye seyakajairwa app
Yakatsanangura zviri pamusoro, UBports atumira chinyorwa umo aanotaura nezve TELEports, icho chisiri chinhu chisiri chepamutemo Teregiramu mutengi iyo yavakagadzira pamwe chete neavo vane basa kune rakakurumbira mameseji app. Kusiyana iyi imwe sarudzo, TELEports chiri chizvarwa app iyo inogona kushandiswa yakadaro kana sewebhu vhezheni. UBports inotaura kuti parizvino vhezheni yewebhu ine zvimwe zvinhu nekuti zvave zvechizvino-zvino, asi kuti iyo vhezheni vhezheni inopa iwo akanyanya maficha uye iri nani kubatanidzwa neiyo inoshanda sisitimu.
Pakati pezvatinogona kuita izvozvi, muv0.8.1 iyo yakanyorwa seBETA yatinayo:
Zvine musoro, mukana wekupinda / kuzviratidza isu tichishandisa nhamba yedu yerunhare. Zvikasadaro hapana chingaite zvine musoro.
Chinyorwa chehurukuro, chiteshi uye kunyange mapoka, chimwe chinhu chave chiripo kwemwedzi mishoma. Nhaurirano nedzakamirira mameseji dzicharatidza iro bharumu rine nhamba nenzira imwecheteyo yatinoona mune mamwe mavhezheni eTeregiramu.
Stickers. Pari zvino, inongotsigira izvo zvakagadziriswa. Iyo yekuvandudza inotaura kuti isu tinofanirwa kuisa iyo yewebhu vhezheni kana tichida kuona iwo maficha. Iwo ma sticker atinogona kushandisa ndiwo atakaenderana neaccount yedu, asi tichiyeuka kuti iwo ane hupenyu haazoshanda kusvikira kumwe kunatsurudzwa mune ramangwana.
Maseji akachengetedzwa. Apa ndipo patinochengeta pachedu mameseji, anobatsirawo zvakare kana tichida kutumira mafaera kubva kune chimwe chinhu kuenda kune chimwe.
Night mode. Ivo havataure chaizvo zvazviri, asi zvese zvinoita kunge zvinoratidza kuti ichachinja ruvara rweiyo interface kubva pachiedza kuenda kurima.
Yakagadzirwa neUBports nezano uye nerubatsiro kubva kuTeregiramu
Kana iwe ukapinda iyo UBports ruzivo chinyorwa uye wotarisa pane zvakatorwa, iwe uchaona kuti vese vari muSpanish yakakwana. Imhaka yekuti chinyorwa chekutanga chakanyorwa na Miguel Menendez (@mimecar - pano), asi isu tinogona kutovimbisa kuti vatauri veSpanish havazofaniri kunetseka nezvekushandura chero nguva.
Kunyangwe TELEports isati yave kusanganisira izvo zvazvino zvinhu, senge vhidhiyo mafoni, chimwe chinhu chine musoro kana tichifunga kuti havana kana kusvika pawebhu vhezheni, hongu inosanganisira yazvino vhezheni ye tdlib, ndiko kuti, emaraibhurari ayo Teregiramu inopa kuti ikure. Izvi zvinoreva kuti mabasa achange achisvika uye kushandisa iyo app muUbuntu Kubata ichave ichiwedzera uye yakafanana neizvo zvatinoona patinotaurirana mune desktop desktop. Dai zvaive zvisiri, uye sekutaura kwandaita, unogona kuisa Telegraph Desktop uchishandisa Libertine, asi chenjera neizvi: maapplication muzvitoro haana kunyatsogadziriswa kubata zvidzitiro, uye zvishoma kune mafoni, sezvakaita maapp OpenStore.
Semushandisi weTeregiramu uye muridzi wenguva yemberi wePineTab, ndinofara kuti UBports iri kuvandudza TELEports, asi zvinondishungurudza zvishoma: ikozvino ndave kutarisira kutarisira tablet yangu.
Yakagadziridzwa chinyorwa nechikamu cheruzivo chakapihwa naMiguel nezve TELEports. Iwe une rumwe ruzivo uye zvinongedzo mumashoko echinyorwa chino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » TELEports, Ubuntu Touch inotova nemutengi weTeregiramu
Nezve iyo Pine Tab, mubvunzo chete wandinayo ndewekuti Ubuntu Kubata kuri muchiSpanish. Uyu mubvunzo wakabvunzwawo nemwanakomana wangu ari kumashure kwekutora Pine Runhare uyezve, ane kusahadzika nezve maitiro ekuisa iyo OS uye mutauro.
Kana iwe ukakwanisa kujekesa aya mapoinzi kwandiri, ini ndingafarire, kukwazisa
Mhoro Jose Luis. Ini handikwanise kukupa mhinduro yechokwadi nezvazvo, asi ndatove muUbuntu Kubata 16.04 ndaona nzvimbo muCastilian, saka zvinofanirwa kunge zvakadaro. Ini handidi spam, asi tarisa apa https://www.innerzaurus.com/que-es-ubuntu-touch/
Miguel Menendez (mimecar) akadaro
Iyo PineTab ichakwanisa kushandisa Ubuntu Kubata muSpanish. Parizvino kuchinjika (chiteshi) kuri kuvandudzwa. Iyo sisitimu inotanga neyekutanga asi kuchine basa rekuita. Kana iyo piritsi yasvika, zvese zvinofanirwa kunge zvichiwedzera kumberi. Ubuntu Kubata kunoenderana neyakagadzika inonzi Halium (kugona kushandisa madhiraivha eApple). Sezvo iyo PineTab isingadi iyo, iwe unofanirwa kubvisa iyo rara uye nekuda kwechikonzero icho kuri kuvadhurira ivo zvishoma. Iwe unogona kuve neruzivo zvakanyanya mune isina kufanira PinePhone boka paTeregiramu:
Pindura Miguel Menéndez (mimecar)
Pane zvimwe zvinhu zvandaida kutaura pamusoro peichi posvo (sezvo ini ndichiita senge ndataurwa). Ini zvakare ndinowedzera akati wandei ma link anotsanangura zvimwe zvinhu zvakadzama kupedzisa kutumira.
Ubuntu Kubata kune maviri matanho ekuchengeteka: kuvharirwa uye mvumo yekushandisa. Mvumo inoshanda zvakafanana neApple. Kugadziriswa kunoreva kuti kunyangwe iwe uine application yakaipa, haigone kuwana yako mushandisi data.
TELEports yakaburitswa gore rapfuura uye timu yeUBports inotora chikamu mairi nevanhu vazhinji. Ini handisi iye munyori we TELEports. Ini ndangonyora tsamba ndichitsanangura mashandiro ayo. Iyi yekupinda, senge yapfuura, inoshandurwa pane iyo UBports blog.
MuOpenStore kune maWebApp mazhinji, asi iwe zvakare unezvishandiso zvemuno. Pane musiyano pakati peOpenStore neakachengetedzwa: iwo mashandisirwo anoenderana nhare kana piritsi. Iwe unogona kuve nechikumbiro kubva kune repository uye haigone kushandiswa nekuda kwekuganhurirwa kwehardware.
Libertine yakanaka kumashandisirwo edesktop pahwendefa kana nechiratidziro chakabatana. Hazvina basa kushandisa parunhare. Iwo mamenu haana kuchinjika uye madhiraivhu akavakirwa pachinhu chekuti iwe une mbeva nekhibhodi.
Mhoro Miguel. Ini ndashandura izvo zvanga zvisina kunyatsoenderana zvine chekuita ne TELEports, ndikawedzera mamwe ma link uye ndataura kuti kune rumwe ruzivo mune zvakataurwa muchinyorwa chino. Kuverenga zita rako pakutanga kwenyaya yeUBports uye nekuona zvidzitiro muSpanish, ndakafunga kuti une chekuita nekusimudzira.
Kana iwe ukaverenga chirevo ichi, uye kunyangwe kana usiri chikamu cheUBports sezvandaifunga, unofunga here kuti mune ramangwana, kunyangwe iri kure, mamwe mapurogiramu ane simba (seGIMP) achasvika paOpenStore?
Hapana chinoitika. Dzimwe nguva zviri nyore kurasika nezvinhu zvakawanda. Chekutanga yaive chinyorwa pane yangu blog uyezve dudziro.
Zvikumbiro zvakaita seGimp kana Firefox izvozvi zvinogona kushandiswa mukati meRibertine mudziyo. Iyo inonyanya kukosha ndeyekuti ivo havaenderane neichi chigadzirwa. PaM10 vanoshanda vasina matambudziko, pafoni haigone kushandiswa. Izvo zvinoshandiswa zvinogona kuiswa uchishandisa Ubuntu zvinyorwa zveARM.
Kuti chikumbiro chisvike kuOpenStore chinofanira kuchinjika. Ini ndinofunga kuti kana pane imwe nguva vhezheni yakashandurwa yeGimp kana Firefox yakagadzirwa vanogona kuoneka ipapo.
Firefox 80 inouya nekuvandudzwa kwevhidhiyo yekumhanyisa, shanduko muzvitupa zveSSL uye nezvimwe